Ma Doonaysaa In Aad Is Jeclaysiiso Qof Aan Wali Wax Dareen Ah Kuu Qabin, 5-tan Wado Raac, Waad Ku Guulaysan Kartaa Qalba Qofka Aad Jeceshahay. – Allsomali.net
HomeArimaha QoyskaMa Doonaysaa In Aad Is Jeclaysiiso Qof Aan Wali Wax Dareen Ah Kuu Qabin, 5-tan Wado Raac, Waad Ku Guulaysan Kartaa Qalba Qofka Aad Jeceshahay.
20 January 2021 allsomali Arimaha Qoyska, Wararkii Ugu Dambeeyay 0
Waxa iska dabiici ah in uuna qofku helin jacaylka dadka oo dhan sababta oo ah qof walba waxa uu leeyahay shaqsiyada gaar ah oo uu kaga duwan yahay dadka kale ama wax u arko sida ayna dadka kale wax u arkin.
Laakiin waxa jirta talaabooyin aad qaadi karto hadii aad doonaysid in aad is jeclaysiiso qof aad doonayso in aad noloshaada la qaadato.
Hadaba raac qodobadan hoos ku qoran waxana aad heli doontaa dareenka, qalbiga iyo jacaylka qofka aad doonaysid.
1.Hubinta dareenka dhabta ah ee qofka:
Ugu horayn waa in aad hubiso dareenka dhabta ah ee qofka ee dhankaaga, hadii ayna gabadhu kuu hayn wax dareen ah ama uuna Wiilku kuu hayn wax dareen ah waxa aad ku dhaqmaysaa sida kula gudboon in aad marka hore qofka la samayso xidhiidh kaa caawinaya in uu qalbiga qofka dareen kuu galo kadib waxa aad samayn kartaa in aad is jeclaysiiso.
2.Dib U Eegista Sababta Uuna Kuu Jeclayn:
Wadahadalka dhexmara laba qof waxa uu cadayn karaa fahamka sababta uuna qofku u jeclayn qofka kale iyo qaabka aad ula dhaqmaysi sidaas darteed dib u eeg sababta ayna kuu jeclayn wiilku ama sababta ayna kuu jeclayn gabadhu kadib waxa aad bilaabi kartaa in aad hagaajiso xidhiidhka.
3.Si Karaamo Leh Ula Dhaqan:
Waxa dhici karta in aad qofka is jeclaysiiso adiga oo samaynaya talaabooyin aad qalbigiisa ugu dhawaan karto sida in aad Hadiyado siiso, in aad wakhti la qaadato iyo waliba in aad ula hadasho qaab uu qofku ka dareemi karo in aad Karaamaynayso taas oo keeni karta in uu ku jeclaado.
4.In Aad Muhiimada Siiso:
Waxa daraasado lagu ogaaday in dhagasiga qofku in uu door weyn ka leeyahay in uu qof ku jeclaad, marka ay labada qof is jecelyihiin waxa ay isku muujinayaan muhiimada ay siinayaan hadalooda.
Hadii ay Gabadhu si fiican u dhagasato wiilku marka uu la hadlayo waxa ay keenaysaa in uu jeclaado Wiilkana sidoo kale sidaas darteed isku day in aad muhiimad siisid qofka hadii aad doonayso in uu ku jeclaado.
5.In Aad Indhaha U Saartidi Indhaha qofka aad jeceshahay:
Inta badan Xishood ayaa sabab u noqdo in ayna laba qof indha si toos ah isaga eegin laakiin waa talaabo muhiim ah oo aad qof isku jeclaysii kartid.
daraasad la soo saaray ayaa sheegtay in lamaanaha indhaha si toos ah isaga eeg in ay 75% ku guulaystaan xidhiidhooda jacayl.